Iddoon Jiru Irraa 18: Awustiraliyaa dhufee wayitan nama qullaa deemu arge guddaan rifadhe – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIddoon Jiru Irraa 18: Awustiraliyaa dhufee wayitan nama qullaa deemu arge guddaan rifadhe
Hojiin oggummaa fayyaa kan ittiin uumata garggaaran waan ta’eef kan nama boonsuudha
(bbcafaanoromoo)–Qananiituu Butuchaan jedhama, waggoota 17’n darban keessa as biyya Awustiraaliyaa magaalaa Melboorn keessan jiraadha. Biyya kana ergan dhufees baradhee narsii ta’uun kanan hojjechaa jiru wayita ta’u hojii cidha karoorsu hojjechuunis galii dabalata argachaan jira.
Seenaan biyya kana dhufukoo dheeraadha. Jalqabarratti bara 1992 keessa abbaan warraakoo ammaa fi wayita sana kaadhimaa kiyya kan ture hiraara irra gahaa ture irraa kan ka’e biyyaa bahee Keeniyaatti baqate.
Kanumaan biyya abbaa kiyyaa gadi dhiisuun rakkina kamiin iyyuu kaadhimaa kiyyaa waliin ta’ee simachuuf qophii ta’uun gara Keeniyaatti imale.
Image copyrightQANANIITUU G BUTUCHAA
Garaagarummaan Itoophiyaa fi Awustiraaliyaa gidduu jiruu jechaan himuun rakkisaadha. Kun biyya haalaan guddate qofa utuu hin ta’iin kan mirgi dhala namaa keessatti eegamuu, diimokiraasii fi bilisummaan kan keessatti mirkana ta’eedha.
Nyaata biyya kanaa kan jedhamu hin jiru, sababni isaas namoota biyyoota addaa addaaa irraa dhufantu keessa jiraata waan ta’eef akkuma aadaa isaaniitti nyaata gosa baay’eetu asitti argama.
Kanas ta’ee wayita bashannanaafis ta’u nyaataaf yeroo gadi baanu kanan yeroo baay’ee nyaachuuf filadhu keessa inni tokko ‘Burger chiips’ kan jedhamuudha.
QANANIITUU G BUTUCHAA
Biyya koo irraa waantan yeroo baay’ee yaaduu yoo jiraate aadaa boonsaa nuti qabnuudha. Aadaa waliin jiraachuu fi keessattu aadaa fuudhaaf heerumaa isa baadiyyaa keessatti godhamu sana baay’een yaada.
Cidha fardaan raawwatamu, uffata aadaa bareedeen geggeeffamu sana baay’een jaaladha. Anis carraan na qaqqabee utuun akka aadaa keenyaatti fardaan heerumeera ta’e guddoo natti tola ture.
Magaalaa Melboorn, Awustraaliyaa keessa bakki daawwadhuu fi dhaqee itti bashannanuu jaalladhu inni guddaan bakka qarqara galaanaa ‘Seeyint Kiildaa’ jedhamuudha. Keessattu yeroo biiftuun galaanicha duubaan lixxu ilaaluun guddoo na gamachiisa.
Biyya Awustiraliyaa dhufuukootiin nagaa argachuutti aanee wanti guddaan argadhe biroon carraa barumsaa fi isan baradheen ammoo uummata tajaajiluu danda’u kooti.
Biyya kana keessatti hojii fayyaa hojjechuun waan nama boonsuu fi kan haawaasa ittiin gargaaran waan ta’eef kabajaa guddaa namaaf argamsiisa, kanaafu carraa kana argachuukootti guddaan gammada.
Utuun aangoo addaa tokko qabaadhee biyya kana keessatti waantan jijjiiruu barbaadu ni jira, innis dhiheenyatti saala walfakkaataan wal fuudhuu akka danda’aniif seera haaraa bahe sana haquudha.
Kun seera uumaamaa fi amantii kiyyaan kan wal-faalleessu waan ta’eef utuu dhorkame natti tola.
Haalli biyya kanaa biyya keenyarraa heddu addaa, kanaafuu biyyikoos utuu akkas naa taatee jedhee akkaan hawwu wantii nagodhan baay’eetu jiru.
Kun nama biyya kanatti haaraa ta’eef guddaa waan nama naasisudha. Anaanis yeroon biyya kana dhufe kanumatu na mudate, namoota akkanatti deeman wayitan arge guddoon rifadhe.
Image copyrightQANANIITUU G BUTUCHALAA